ဗွီဒီယိုတစ်ခုကို VLC ဖြင့်မည်သို့လည်ပတ်ရမည်နည်း Gadget သတင်း
VLC သည်မိုဘိုင်းဖြစ်စေ၊ desktop ဖြစ်စေမည်သည့် platform အတွက်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးကစားသမားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ VLC မှကျေးဇူးတင်ပါသည် မည်သည့်ဗီဒီယိုနှင့်အသံ format ကိုလုံးဝအခမဲ့ထို့အပြင်ဗီဒီယို၏အချို့သော parameters များကိုလည်း၎င်းတို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဗွီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရသာ၊ ဦး စားပေးမှုသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ဤပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည်၎င်းတို့ကို VLC မှတစ်ဆင့်အမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်သည် third-party application များအသုံးပြုရန်ကျွန်တော်တို့ကိုရှောင်ရှား ကျွန်တော်တို့ကိုဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခွင့်ပေးပြီး၊ များသောအားဖြင့်ငွေအမြောက်အများကုန်ကျတဲ့အပလီကေးရှင်းတွေ။ VLC ဖြင့်ဗီဒီယိုကိုမည်သို့လှည့်ရမည်ကိုဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသည်။
ဗွီဒီယိုတစ်ခုလှည့်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူတစ်ကြိမ်ထက်မကသောလုပ်ဆောင်ချက်များသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်လို့သင်ရိုက်ကူးမယ့်အလုအယက်ကြောင့်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါပြproblemနာတစ်ခုထက်မကကြုံခဲ့ရတယ်ကင်မရာသည်အလျားလိုက်မဟုတ်ဘဲဒေါင်လိုက်နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်သည်အကြောင်းအရာကိုကစားသောအခါစမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်မော်နီတာကိုလှည့်ရန်လိုသည်၊
ဒေါင်လိုက်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုသည်လူကြိုက်များလာပြီးအချို့ဖြစ်လာသည် IGTV လိုပလက်ဖောင်းတွေ ၎င်းကိုစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ပြုလုပ်လိုပါကစျေးကွက်သည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကိုဖမ်းယူရန်စတင်သဘောပေါက်လာသည် အခြေအနေသည်လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားသောကြောင့်မည်သည့်အဓိပ္ပာယ်မျှမရှိပါ။
အသုံးပြုသူများစွာ၏အလျားလိုက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အတူကြုံတွေ့ရသောဤသေးငယ်သောပြproblemနာကိုဖယ်ရှား။ VLC ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာမှတစ်ဆင့်ဗွီဒီယိုများကိုအခမဲ့မည်သို့လည်ပတ်နိုင်ကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်ဗားရှင်းသည်အကြောင်းအရာကိုသာကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်ဒါကိုမပြင်ပါနဲ့။
1 ဗွီဒီယိုတစ်ခုကို VLC ဖြင့်မည်သို့လည်ပတ်ရမည်နည်း
2 VLC ဖြင့်လှည့် / လှည့်ဗီဒီယိုကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း
3 iPhone ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုများအခမဲ့ဖြစ်သည်
3.2 ဗွီဒီယိုကိုလှည့ ်၍ လှန်လိုက်ပါ
4 ဗွီဒီယိုများကို Android တွင်အခမဲ့လှည့်ပါ
4.2 ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူ - လှည့်၊
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့စက်များအတွက် VLC ကို download မလုပ်သေးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် ဒီ link ကတဆင့်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးလျှင်လှည့်လိုသောဗီဒီယိုကိုဖွင့်သည်။
ပြီးရင် menu ကိုသွားလိုက်ပါ ပြတင်းပေါက်.
၀ င်းဒိုးမီနူးအတွင်းမှရွေးသည် ဗွီဒီယိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အောက်ဖော်ပြပါ tabs များဖြစ်သောအခြေခံ၊ သီးနှံ၊ ဂျီသြမေတြီ၊ အရောင်နှင့်အထွေထွေ။
ဗွီဒီယိုကိုလှည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် tab ကိုနှိပ်ပါ ဂျီသြမေတြီ.
ပြီးရင် Transform လို့ခေါ်တဲ့ပထမဆုံး box ကိုရွေးပြီး select လုပ်ပါ 90 ဒီဂရီလှည့် ဗွီဒီယိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်နိုင်အောင်။ အကယ်၍ ဗွီဒီယိုကိုဇောက်ထိုးလှန်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့ရွေးရမည် ၂၇၀ ဒီဂရီလှည့်ပါ။
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် VLC ဗားရှင်းကကျွန်ုပ်တို့အားဗီဒီယိုများလှည့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ သို့သော် Play Store နှင့် App Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောစီးရီးများရှိသည်။ ဗီဒီယိုများအခမဲ့လှည့်လည်ခွင့်ပြုသည့် application များ မတော်တဆမှုအားဖြင့်ငါတို့သည်မှား orientation ကိုအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပါပြီ။
VLC ဖြင့်လှည့် / လှည့်ဗီဒီယိုကိုမည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း
ဤအရာအားလုံးသည်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားသည်မှာဗွီဒီယိုများကိုစံပြအနေအထားဖြင့်ဖွင့်နိုင်ရုံသာမကဘဲ၊ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုဖွင့်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်ဗွီဒီယိုကိုသိမ်းဆည်းချင်သည်။ လည်ပင်းလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဖို့မလိုဘဲ။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုကိုလှည့်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုသောအနေအထားတွင်ရှိလျှင် File> Convert / emit ကိုနှိပ်ပါ။ ဖိုင်ကိုသိမ်းချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအခြိနျမှစ။ , ငါတို့ကဗီဒီယိုအသစ်ဖွင့်လှစ်အခါတိုင်း အခြားမည်သည့်ကိရိယာပေါ်တွင်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုကိုမည်သို့ပြသသင့်သည်အပေါ် မူတည်၍ အလျားလိုက် (သို့) ဒေါင်လိုက်ပြသလိမ့်မည်။
iMovie သည် Apple ၏ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာဖြစ်ပြီး App Store မှအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤလျှောက်လွှာနှင့်ဗီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှမြန်မြန်လှည့်နိုင်သည် မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုသုံးစရာမလိုဘဲ.
ဗွီဒီယိုကိုလှည့ ်၍ လှန်လိုက်ပါ
Rotate & Flip Video သည်ရိုးရှင်းသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုဗီဒီယိုအခမဲ့လှည့်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ iOS စက်မှ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှည့်လိုသည့်ဗွီဒီယိုကိုသာရွေးပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောနောက်ဆုံး orientation ကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုများကို Android တွင်အခမဲ့လှည့်ပါ
ယင်း၏အမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းအခမဲ့ Video Rotate လျှောက်လွှာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal မှဗွီဒီယို၏တိမ်းညွတ်မှုကိုလုံးဝအခမဲ့လှည့်နိုင်သည်။ ဗီဒီယိုကိုလှည့်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းတွင်တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်မျှဝေနိုင်သည်။
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူ - လှည့်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုများကိုလှည့်ချင်ရုံသာမကအပိုင်းတစ်ခုကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ မတူကွဲပြားသောဗွီဒီယိုများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ နှေးကွေးစွာပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုတည်းဖြတ်လိုလျှင်။ ဤလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်သည်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုထားလို့ပါ။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူ - လှည့်၊ လှန်ကြည့်ပါ၊ နှေးသောလှုပ်ရှားမှု၊ ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများ
ဗွီဒီယိုကိုမရိုက်ကူးခင်၊ ကိရိယာကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်ပေးရမယ်၊ ဒါမှငါတို့ကိရိယာရဲ့ gyroscope ကဘယ်ဖုန်းကိုဘယ်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပေးပါ။ ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်လိုက် (သို့) အလျားလိုက်ရိုက်ကူးခြင်းစတင်ပါက၊ မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမည်မျှလည်ပတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒါကဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်တယ်ဆိုတာကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်တစ်စက္ကန့်ကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ကင်မရာအပလီကေးရှင်း၏ orientation ကိုမှန်ကြောင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းကပိုကောင်းတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဗွီဒီယိုများသည်ကိရိယာ၏ကင်မရာကမ်းလှမ်းသောအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုအသုံးချလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကိရိယာ၏ zoom ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည် optical zoom မရှိပါ မဟုတ်ရင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ပုံကိုကျယ်စေပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးနေသည့်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ဖြစ်သည်။
သင်အမြဲသတိရသင့်သည့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်မှာ နေကိုမျက်နှာမပြုဘဲမနေနှင့်။ ပုံထဲကအရာဝတ္ထုတွေအမှောင်ထုတွေကျလာပြီး၊ ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့လူတွေ (သို့) အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ silhouette တွေကိုသာပြသတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » ဗွီဒီယိုတစ်ခုကို VLC ဖြင့်မည်သို့လည်ပတ်ရမည်နည်း